ငါချစ်သောမိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများ | Apg29
ဂြိုလ်သားတို့သညျ လာ. အကြှနျုပျတို့ကို ယူ
ဒါဟာအမေရိကန်နိုင်ငံ "အက္ခရာများကျန်ရစ်" circulates ။ အဆိုပါပီတိဖွစျနိုငျသောအခါအလာမယ့်ကာလ၏အသိပညာရဖို့ရန်သူတို့ကို enable ခရစ်ယာန်များမဟုတ်သောသူတို့၏ချစ်ရသူမှပို့ပေးရန်တစ်ဦးကစာတစ်စောင်။ ငါ Swedish သို့ဘာသာပြန်ပြီးပါပြီနဲ့ကျွန်မဒီမှာထုတ်ဝေရန်မည်သူတစ်ဦးစာဖတ်သူကိုထံမှဤစာကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
13. သို့သော်လည်းငါသည်အလိုမရှိ, သင်တို့သည်မြော်လင့်ခြင်းမရှိသောအရာအခြားသူများကအဖြစ်ကြင်နာမထားသင့်ကြောင်း, အိပ်ပျော်သောသူတို့၏အမှုအရာကိုမသိဘဲနေစေသင့်ကြောင်းညီအစ်ကိုတို့, ။
ယေရှုသည်သေပြီးမှတဖန်ထမြောက်, ထိုနည်းတူဘုရားသခငျသညျကိုယျတျောနှငျ့ယရှေုကိုအိပ်ပျော်သောသူတို့၏ဆောင်ခဲ့ဦးမည်ဟုယုံကြည်ကြသည်မှန်လျှင် 14 ။
ဤ 15. ကျွန်တော်အသက်ရှင်လျက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သခင်ဘုရား၏လာမယ့်ရန်ကျန်ကြွင်းသောငါတို့သည်ဘာမျှမအိပ်ပျော်သောသူတို့၏ရှေ့တော်သို့ဝင်သင့်ကြောင်း, သခင်ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တရားအားဖြင့်သင်တို့ကိုပြောပြပါ။
သခင်သည်ကိုယ်တော်တိုင်သည် 16 ကောင်းကင်တမန်မင်း၏စကားသံနဲ့အတူဘုရားသခငျ၏တံပိုးခေါ်ဆိုခနှင့်အတူတစ်ဦးမှာထားသောကြွေးကြော်သံနှင့်အတူကောင်းကင်ကနေဆင်းရကြလိမ့်မည်, ခရစ်တော်၌ပထမဦးဆုံးသေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်။
17. ထိုအခါအသက်ရှင်ဖြစ်ကြပြီးကျန်ကြွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဘုရားကိုဖြည့်ဆည်းဖို့မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးသူတို့နှင့်အတူအတူတကွချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားရကြလိမ့်မည်။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းသခင်ဘုရားနှင့်အတူရှိရလိမ့်မည်။
ခဏမှာတော့တစ်စက္ကန့်၏ 1/40 အတွက်, သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုလက်နက်ချနှင့်သခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သညျယရှေုခရစျသရရှိထားသောသူတို့အားဤလောက၏ကနေပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်, ဤသည့်အချိန်တွင်မဆိုဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုသင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြောင်းသေချာဘို့ကိုသိနိုင်မလဲ?
ရောမ 10: 9-10
သငျသညျယရှေုကိုသခင်ဘုရားသည်နှင့်ဘုရားသခင်သည်သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသငျသညျကယျတငျခွငျးသို့ရောပါလိမ့်မည်ဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်ကြောင်းသင်၏နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံလျှင်9။
စိတျနှလုံးအထဲ၌ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အကြောင်းမူကား 10. ဖြောင့်မတ်လျက်ရှိ၏နှင့်ပါးစပ်ဝန်ခံသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်အတူ။
ဘုရားကျောင်း Going ဝတ်ပြုစရိုက်ကိုပြုသင့်ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်တို့သည်ကောင်းသောအကျင့်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်ကြ, သင်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ဘို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ တစ်ဦး "ကောင်းသောလူတစ်ဦး" ဖွစျသငျသညျမကယ်မပါဘူး။ သငျသညျကိုယျတိုငျကိုကသင်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သညျယရှေုကိုလက်ခံရပေမည်။ ဒီအပေါ်ဤမျှလောက်များစွာသောကျမ်းချက်များကိုရှိပါတယ်။ သင်တို့တွင်အတျောမြားမြား "ချီဆောင်ခြင်း" ဟုအဆိုပါပီတိအကြောင်းကိုကြားသိကြပြီးအချို့ပင် "ကဖြစ်ပျက်လျှင်ငါနောင်တရပြီးအဖြစ်ခရစ်တော်ထံလှည့်ပါလိမ့်မယ်" ထင်သို့မဟုတ်ပြောပါတယ်။
ငါ့ကိုအလွန်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်ပျက်အကြောင်းကဘာလဲဆိုတာရှင်းပြပါရစေ။ ကမျြးစာကိုကျနော်တို့ကတစ်ရက်ဒါမှမဟုတ်နာရီမသိရပါဘူးသူကပြောပါတယ်နေစဉ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကရာသီအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ကျွန်တော်ဒီရက်ရဲ့အဆုံးမှာနောက်ဆုံးအချိန်လေး၌နေသောရှင်းပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူများ "ပီတိ" ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားရလိမ့်မည်။
သငျသညျအလိုတော်ရှိလျှင်သန်းပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ပင်တစ်ဘီလီယံကိုကလူကိုမြေကြီးမျက်နှာကနေပျောက်ကွယ်သွားကြောင်း, ဆိုပါစို့။ လေယာဉ်ပျံပျက်ကျ, မော်တော်ကားပျက်ကျ, ရှိသမျှကိုယ်ဝန်ဆောင်မရှိတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူတို့ရဲ့မွေးသေးသောကလေးများဤမျှလောက်ပရမ်းပတာကွာယူသွားစေချင်သနည်းအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်။
ဒီဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါသင် "ပီတိ" ဖြစ်ပွားခဲ့သည်နှင့်သင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြကြောင်းကိုငါသိ၏။ ဂြိုလ်သားတို့သညျ လာ. အကြှနျုပျတို့ကို ယူ. မယုံကြည်ပါနှင့်။ ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် မျှော်လင့်ချက်ရှိနေတုန်းပဲ။ ပထမဦးစွာ ... နေပါစေအဘယ်အရာသည်သင်၏နဖူးပေါ်ဒါမှမဟုတ်လက်ပေါ်မဆိုမျိုးကိုမဆိုအသိပေးစာယူမထားပါနဲ့။ သင်ပြုလျှင်သင်ချမ်းသာမရနိုင်ကြခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲရှုံးနိမ့်နေကြသည်။
အခုဆိုရင်အမှုအရာသွားပါလိမ့်မယ်။ အန္တိခရစ်စင်ပေါ်မှာလာနှင့်ညာဘက်နောက်တဖန်အရာခပ်သိမ်းကိုလုပ်နိုင်အောင်ကူညီဘို့အကောင်းဖြစ်ဖို့ဟန်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ သူသည်ဣသရေလအမျိုးနှင့်အတူတစ်ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်အတည်ပြုမည်အကြောင်း, တိုတောင်းတဲ့အချိန်များအတွက်ကမ္ဘာကြီးငြိမ်းချမ်းရေးအဲဒီမှာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာသုံးနှစ်ခွဲ၏ကြီးစွာသောဒုက္ခမတိုင်မီသုံးနှစ်ခွဲများအတွက်ကြီးမားသောလှည့်စားကြလိမ့်မည်။ တစ်ခုလုံးကိုခုနစ်နှစ်ဆငျးရဲဒုက်ခ ... ကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
ယခုယရှေုခရရန်သင့်အသက်တာကိုလက်နက်ချ။ သင့်ရဲ့သခင်ဘုရားနှင့်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကိုယ်တော်ကိုလက်ခံပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့သည်သင့်ကိုဖမ်း, သင်မူကားသားရဲ၏တံဆိပ်လက်မှတ်ကိုယူဖို့ငြင်းဆန်ရပါမည်, သို့မဟုတ်သင်ငရဲ၌ထာဝရဖြုန်းပါလိမ့်မယ်ဘာပဲလျှင်ကံမကောင်းစွာ, သင်ဖြစ်ကောင်းခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်အလွန်လေးနက်ဖြစ်ပါတယ်။
အန္တိခရစ်ကမ္ဘာအမိန့်များနှင့်တိရစ္ဆာန်၏အမှတ်အသားအကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သည်။ သင်ဤအမှတ်အသားမရှိဘဲရောင်းမဝယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်။ ငါပြင်းထန်စွာအမှတ်တံဆိပ်ကောင်းကောင်းနဖူးသို့မဟုတ်လက်ျာလက်၌ဖြစ်စေ, မဖယ်ရှားနိုင်မကြင်နာတဲ့တက်တူးအတွက် RFID ချစ်ပ်ဖြစ်စေခြင်းငှါယုံကြည်ပါတယ်။ ငါသည်လည်းသင့်ရဲ့ DNA ကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ရုံနက်ဖလင်အဖြစ်ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီးခြောက်လကနေလဲကောင်းကင်တမန်များနှင့်အမျိုးသမီး၏ hybrids တွေကိုသူတို့ရဲ့ DNA ကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါတယ်။ သားရဲ၏, Mark အတူတူပြုလိမ့်မည်။
ဗာတီကန်သူတို့ဂြိုလ်သားထောက်လှမ်းရေးနှင့်အဆက်အသွယ်အစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီဘယ်မှာအရီဇိုးနားအတွက်တောင်ပေါ်ဂရေဟမ်မှာလူစီဖာစီမံကိန်းကို / တယ်လီစကုပ်ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာဂြိုလ်သားမရှိကြပေ။ အဘယ်သူမျှမဂြိုလ်သားရှိပါတယ်။ သူတို့ကပြိုလဲကောင်းကင်တမန်များဖြစ်ကြ၏။
ထိုအခါငါယုံကြည်သူများလွန်ပါစေနှင့်သညျဟုထငျဂြိုလ်သားတက်ပြသာလွန်ထောက်လှမ်းရေးဖြစ်သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်များနှင့်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်သူ့ကိုယ်သူရှင်းပြသူတို့ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့သူတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ကြောင်း, အရာပါလိမ့်မယ်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့မြင်ကွင်းကရှင်းပြသည်လည်းမရှိစဉ်းစား စစ်မှန်တဲ့ခရစ်ယာန်များသည်ဖြစ်ကြသည်။
လက်ရှိပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ကလျှင်မမိစ္ဆာပရောဖက်တကယ်ရှေ့ပြေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ... မကြာမီပီတိဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
မစောင့်ပါနဲ့။ ယခုသညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိ။ သငျသညျမပွုနှင့်ဆိုပါကကျနော်တို့ကျနော်မျှဝေထားသောအရာကိုသတိရဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်ပြီးပိုအရေးကြီးတာက,
ယရှေုသညျသငျသညျကိုခစျြနှငျ့သငျထာဝရအသက်ကိုကိုယ်တိုင်ရသည်ဟုနိုင်အောင်သင်တို့အဘို့အသေခံတော်မူ၏။ သင်ကျန်ရစ်ပါလိမ့်မည်ကွောငျးတှေ့လြှငျ, ယေရှုအားချက်ချင်းပြောဆိုပါ။ သင့်အနေဖြင့်ထိုပြည်၌အပေါ်သို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုကြောက်မက်ဖွယ်, ဒါမှမဟုတ်သေခြင်းတရားလွတ်မြောက်ရန်မည်မဟုတ်, သင်မူကားထာဝရအသက်ကိုအမွေခံရကြလိမ့်မည်။
သငျသညျယရှေုကိုကိုလက်မခံခြင်းနှင့်မသေဘူးဆိုရင်, သင်ငရဲ၌ထာဝရဖြုန်းပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျသားရဲ၏တံဆိပ်လက်မှတ်ကိုယူလျှင်, သင်မျှော်လင့်ချက်မရှိဘဲအစဉ်အမြဲပျက်စီးကိန်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိသည်။ သငျသညျကိုငရဲ၌ထာဝရဖြုန်းပါလိမ့်မယ်။
ယေရှု၌ယုံကြည်ပါတယ်။ ကယျတငျတျောမူသောသူ၏အခမဲ့ဆုကြေးဇူးကိုလက်ခံပါ။ မေးပါများနှင့်ယခုသညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိ။
"ယေရှု, ငါအပြစ်ရှိသောသူဖြစ်ကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်။ ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့အပြစ်ကြောင့်အသေယုံကြည်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သင်သည်လက်ခံပါ။ ယေရှုရဲ့နာမတော်အားဖြင့်အာမ။ "